Sida Loo Noqdo Barnaamij Sameeye Moobil | Martech Zone
Talaado, Agoosto 28, 2012 Adam Yar
Marwalba waxaan u maleynayay in codsiyada biraawsarka moobiilku ay dhaafi doonaan barnaamijyada moobiilka - sida barnaamijyada SaaS ay uga gudbeen barnaamijka kombuyuutarka. Si kastaba ha noqotee, arrimaha khuseeya arrimaha gaarka ah, dhul-bixinta, xoqista iyo awoodaha kale ee mobilada… waxay u egtahay in codsiyada mobiladu ay halkan joogaan. Faahfaahintan ka socota Dugsiyada.com cadeeyaa baahida iyo habka kooxdaadu u qaadan karto inay noqdaan kuwa horumariya barnaamijyada mobilada.
Gartner wuxuu saadaaliyay in sanadka 2015 mashaariicda horumarinta barnaamijka moobiilku waxay ka tiro badan doonaan mashaariicda codsiyada PC-ga illaa 4 illaa 1. Dadka soo saara app-ka mobilada ayaa guranaya faa'iidooyinka 45 boqolkiiba sanadkii marka loo eego kororka shaqaalaynta sanadka, sida laga soo xigtay Bloomberg BusinessWeek. Dice.com ayaa tabisay a Boqolkiiba 100 waxay kordheen shaqooyinka loogu dhajiyo dadka sameeya barnaamijyada mobilada inta u dhaxaysa 2010 iyo 2011.
Tags: infographichorumariya barnaamijyada mobiladacodsiyada mobileapps mobile
Ma Doonayo Inaan Maqlo Qisadaada Nacala